Manomeza voninahitra 4X, ireto ny fiheveranay | Androidsis
Alfonso de Frutos | | MWC, About us, hevitra
Efa nanararaotra nampiseho aminao ny antsipirian'ny mpikambana sasany amin'ny marika Huawei vaovao miompana amin'ny tsena eropeana izahay. Ka, rehefa avy nandinika ny Honor 6 Plus y Hajao 6, izao kosa dia anjaran'ny rahalahin'ny fianakaviana afovoany, ny Manaja 4X.
Fantsona misy fijery tena tsara sy toetra teknika mihoatra ny ampy ho an'ny mpampiasa antonony rehetra. Raha fintinina, mpifaninana matotra ho an'ny ZTE Blade S6 hatramin'ny vidiny tery, 199 euro, ary ny maha any Eropa azy dia nahatonga azy io ho fitaovana tena manintona. Tsy hahatratra ny anay ve ianao Manaja famerenana 4X?
2 Terminal eo afovoany amin'ny vidiny tena manintona
3 Fakan-tsary Sony EXMOR RS IMX214 13 megapixel
Amin'ny fandrefesana ny 152.9 x 77.2 x 8.65 miaraka amin'ny lanjan'ny 170 gramaAorian'ny fitsapana ny Honor 4X, azontsika atao ny milaza fa terminal mampahazo aina sy azo tantanana izy io, na eo aza ny haben'ny efijery. Ny famaranana polycarbonate dia tsy dia lafo raha ampitahaina amin'ireo zokiny, na dia mahafinaritra aza ny mikasika azy.
Eo amin'ny farany ambany, ny ekipa Huawei dia nanamboatra mpandahateny stereo miaraka amina kalitao tsy azo ekena, raha eo an-tampony no ahitantsika ny vokatra hampifandray headphones. Ny ilany ankavanan'ny Honor 6 dia toerana nahitan'izy ireo ny fanaraha-maso ny volume sy ny lakilen'ny herin'ny telefaona.
Terminal eo afovoany amin'ny vidiny tena manintona
Ny Honor 4X dia manomboka amin'ny fikasana tena mazava: hanafika tsy misy indrafo ny tsena antonony. Ary, na eo aza ny vidiny, dia tsy maintsy ekena fa ny toetra teknikan'ity phablet ity dia tena mahaliana. Hanomboka amin'ny firesahana ny momba anao izahay 5.5-inch IPS efijery izay mahatratra ny vahaolana 1280 x 720 teboka.
Ny kalitaon'ireo sary dia tsy ny tsara indrindra eny an-tsena, tsy maintsy raisina fa ny efijery dia mahatratra 267ppp ny haavony, na dia ampy noho ny fampiasana isan'andro aza izy io. Ny fon'ny silikony dia noforonin'i a HiSilicon Kirin 620 64-core SoC miaraka amina maritrano XNUMX-bit izay mahatratra ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro 1.2 GHz noho ny 8 Cortex A-53 cores misy azy, miaraka amin'ny RAM 2 GB.
Lehibe nefa hitantsika tamin'ity fitaovana ity ny fahatsiarovany ROM. Na eo aza ny fananana 8 GB ihany no tahiry anatiny ny Honor 4X dia tsy manana slot micro SD card ka tsy ho azonao atao ny manitatra ny memory voafetra izay tonga fenitra amin'ny phablet aziatika.
Ny bateria dia iray amin'ireo tanjak'ity telefaona ity. Ary io dia manana 3.000 mAh, mampanantena fahaleovan-tena mandritra ny 72 ora ny mpanamboatra. Ho hitantsika raha marina izany amin'ny famakafakana amin'ny ho avy, satria raha marina izany dia miatrika ny iray amin'ireo fanatsarana tsara indrindra isika.
Fakan-tsary Sony EXMOR RS IMX214 13 megapixel
Ny Honor 4X dia mampifangaro ilay solomaso mitovy amin'ny Honor 6. Ny sensor-ny mahery 214 megapixel Sony Exmor RS IMX13 manolotra fampisehoana mahavariana fotsiny. Ny fitsapana notanterahinay dia tsy mety nahafa-po kokoa, manasongadina ny fifantohan'ilay fitaovana haingana.
Mampalahelo fa raha ny amin'ny fanaovana makrô, ny terminal dia mijaly amin'ny olana amin'ny fampisehoana, na dia manana faharetana kely aza dia mihoatra ny ampy. Asongadino ny Fakan-tsary eo anoloana 5 megapixel, mety ho an'ireo tia sary.
Fantsona iray izay nahatonga anay hanana fiheverana tena tsara ary ny hany hitanay dia ny fahatsiarovana anatiny voafetra ny fitaovana. Saingy raha dinihina fa ny Honor 4X dia hahatratra ny tsena Espaniola ny fahasarotana vidin'ny 199 eurosTokony ho fantatra fa natsipin'i Huawei teo am-baravarankely ny trano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » MWC » Manomeza voninahitra 4X, ireto no tsapanay
Norbe dia hoy izy:
en http://t.co/Dissn4sofU napetrany indray mandeha tamin'ny € 175
Valiny tamin'i Norbe
8Gb ihany ny fahatsiarovana anatiny ary tsy misy fihanaky - -> Hadisoana!
Lenovo S60, safidy avo lenta kokoa ho an'ny Moto E 2015